Zingakanani iiDatha eziHlaziyiweyo eziNkulu eziBalulekileyo kwi-DSPs | Martech Zone
Zingakanani iiDatha eziHlaziyiweyo eziBalulekileyo eziBalulekileyo kwii-DSPs
NgoMvulo, Meyi 8, 2017 NgoLwesibini, Meyi 9, 2017 UFilipu Kushmaro
Idatha enkulu kubahlalutyi Ibililitye lembombo kwizikimu ezisebenzayo zentengiso kunye ne-adtech iminyaka eliqela ngoku. Ngeenkcukacha-manani zokuxhasa uluvo lwentsebenzo enkulu yohlalutyo lwedatha, yinto elula yokucebisa ngaphakathi kwinkampani yakho, kwaye iya kukwenza ukuba ubonakale ulungile ngokuba ingulowo wayicebisayo.
Idatha enkulu kubahlalutyi Ivavanya idatha enkulu yedatha (njengoko igama linokuthetha njalo) kwaye ivumela abavavanyi ukuba basebenzise loo datha ukufumana iipateni, iindlela zentengiso kunye nokukhetha inani labantu kunye nokuziphatha komsebenzisi. Emva koko ubeke loo datha kwisenzo ngokuyivumela ukuba ikhokele ukhetho lweshishini olunolwazi. Kuthatha ulwazi oluninzi kunye nokulupholisa kwizigqibo ezincinci, zexesha lokwenyani ezibonise ukuba luncedo olukhulu kuzo zonke iintlobo zamashishini kwihlabathi liphela.
Iqonga elisecaleni leMfuno (Ii-DSPs), yikholelwe okanye hayi, lawula ukuvuna izibonelelo ezinzima ekunyukeni kwedatha enkulu kubahlalutyi, Nasi isizathu:
Yenza izigqibo ezinolwazi
I-DSP yindlela yokukhawulezisa inkqubo yokuthenga indawo yentengiso kwaye ngaphakathi kokusebenziseka konxibelelwano olunye.
Njengenxalenye yesixokelelwano sebango kwi unikezo nemfuno Umjikelo wezoqoqosho -i-DSPs ziyaxhamla kumathuba athi aziswe yidatha enkulu kubahlalutyi ngokwenza imali kulwazi abalufumanayo.
Ngokwemigaqo ye-layman, ii-DSPs zinokuqokelela ngokukhawuleza, yonke intengiso yamathuba entengiso kwinto enye. Oku kuvumela iarhente okanye iqela lentengiso ukuba lithathe isigqibo sokuba lithengwe phi indawo yentengiso yephulo labo elilandelayo. Umphezulu womgca we-DSPs usebenzisa ii-algorithms ezikhethekileyo kumcimbi weemillisecond ukuvumela abathengisi ukuba bafumane izivumelwano zodidi oluphezulu.
Isizukulwana esilandelayo kubahlalutyi iinjini ezinje SQream ujonge ukwenza lula inkqubo ngokwandisa amandla kubahlalutyi ukuqhubekeka ngendlela ephawuleka kakhulu, ukuvumela oososayensi beenkcukacha kunye nabahlalutyi ukuba baqulunqe ulwazi olufanelekileyo ngokukhawuleza kwiidathasethi ezinkulu kakhulu. Iinjini ezinjalo zinciphisa ukubambezeleka kokubuza imibuzo entsonkothileyo kwindawo yedatha enkulu, ivumela iiNzululwazi zeDatha ukuba zivelise ngakumbi, zifumanise iimodeli zedatha ngokukhawuleza kwaye zibeke iimodeli kwimveliso ngokukhawuleza. Xa imodeli ingcono, ukulungeleka kulunge ngakumbi kumsebenzisi, ixabiso lokubhida liphezulu, kwaye amaxabiso aphezulu anyusa umlinganiso we-bid / win ratio.
Injongo yonke yentengiso kukunyusa ixabiso lenkampani yakho ngokwandisa ukuthengisa kwaye yiyo kanye loo nto idatha enkulu kubahlalutyi sebenza ngokudibeneyo nee-DSPs. Ngokudibanisa ngokufanelekileyo idatha enkulu yedatha, uvumela ukwenziwa kwentengiso kwenziwe kubhabho. Kwaye kule meko, awuphosa nje izinto eludongeni ulinde ukubona ukuba zeziphi izinti, eneneni wenza izigqibo ezinolwazi kunye nedatha yokuyixhasa.
Kuthatha izakhono zohlalutyo oluntsonkothileyo ukuze kuhlolwe ngokwaneleyo kwimfumba yedatha kunye netekhnoloji. Ngamanye amaxesha, isuntswana ledatha oyifunayo ukuze wenze elona qhinga lakho lokuthengisa linolwazi inaliti kwindawo yokutya. Ngokusebenzisa inkonzo ye-DSPs, amaqela entengiso kunye / okanye iiarhente ziyakwazi ukuzifaka kumathuba amahle, ziqinisekisa eyona nzuzo iphambili kutyalo-mali kunye neepeni ezihlawulelwa kwidola ukuthenga indawo yentengiso. Ii-DSPs zivuna izibonelelo ezinkulu ngokuba nedatha enkulu ibandakanyiwe kwii-algorithms zayo, iyenza indawo yokuthengisa esekwe kubalo kubathengi abanokubakho.
Sebenzisani ngokupheleleyo amanani
Uhlalutyo olukhulu lwedatha yindlela enzima yokuhamba kuyo kwaye ngokwayo. Ngokuvela kwayo kunye nokubaluleka kwayo okutsha kwicandelo lokuthengisa, ii-DSP ziyakwazi ukuxhamla kule datha ngokuyihlanganisa kwii-algorithms zayo. Ngokufumana imfumba enkulu yedatha yokuhlala, ii-DSP ngoku zibaluleke ngakumbi apha kwaye ngoku ngokudibanisa isixa esikhulu solwazi kunye nokusasaza kwiindlela ezifanelekileyo zentengiso kunye neearhente zentengiso.
Umzekelo, idatha enkulu iya kubonelela ngamanani eqela labantu, kwaye ii-DSPs ziya kuyidibanisa ngendlela efanelekileyo. Ngokuhlalutya ulwazi amanye amaqonga aqokelela, idatha enkulu kubahlalutyi isivumela ukuba sibuze imibuzo, sifumane ulwazi olunentsingiselo. Abathengisi abakwicala leMfuno (Ii-DSAs) ziya kuyisebenzisa le nto, emva koko zibonelele iinkampani ngeendlela ezilungileyo zokubekwa kwintengiso. Ii-DSPs ngomnye wabona baxhamli bakhulu koluphi ulwazi olunikezela ngohlalutyo lwedatha.
Kunzima ukufumanisa ukuba ngubani na oxhamla kwezona ziphumo zintsalela zedatha enkulu kubahlalutyi. Ukusukela oko yahlengahlengiswa kwihlabathi liphela lentengiso, sibonile abaxhamli abaliqela, kodwa akukho namnye ongafihli nto njengalowo usebenzisa ii-DSP. Ngokusebenzisa ulwazi olufunyenwe kwidatha enkulu kubahlalutyi, Ii-DSP ziye zaba yimveliso engcono yokuthengisa kunye namasebe ezentengiso.
Injongo yonke yentengiso kukunyusa ixabiso lenkampani yakho ukwanda kwentengiso kwaye injalo kanye idatha enkulu kubahlalutyi sebenza ngokudibeneyo nee-DSPs.
Ngokusebenzisa inkonzo ye-DSPs, amaqela entengiso ayakwazi ukuzifaka kumathuba amahle, aqinisekisa eyona mbuyekezo ilungileyo kutyalo-mali Kunye nokuhlawula iipeni kwidola ukuthenga indawo yentengiso
Ngaphandle kwamathandabuzo, ii-DSPs zibonelela ngamathuba angcono okuphucula i-ROI kwiintengiso.
tags: Uhlalutyoidatha enkuluUhlalutyo olukhulu lwedathayesayensi yolwaziidatha inzululwaziiqonga icala icalaDSPyandisa inzuzoisikwere
UFilipu Kushmaro, uVP ukusebenza e Inqanaba, Wazalelwa eCanada ku-Commodore 64 Guru utatomkhulu notata oyithiyileyo yonke into yedijithali, eyamguqula waba ngumntu ongayithandi yonke into yedijithali kodwa othanda ukuyicacisa. Ubunjineli besoftware, ubuchwephesha obuqinisekiswe nguMicrosoft, umphathi wewebhu kunye nokunye okuninzi. Ngenye imini wagqiba kwelokuba ayeke konke ekwandiseni icala lakhe lokuyila. Ukubhala malunga nezinto athiyileyo ukuzenza sele kungaphezulu kokuzonwabisa. Xa engabhlogi okanye esenza into ayenzayo emsebenzini, unokumfumana kuqeqesho lokuzivocavoca kwi-MMA naseBrazil Jiu Jitsu.
Ngaba umbutho wakho ukulungele ukusebenzisa idatha enkulu?